Archive du 20170731
Hery Rajaonarimampianina Mitohy ny fampiesonana
Hanomboka indray ny fanitarana ny seranam-piaramanidina any Nosy Be. Antitra sy azo lazaina ho tsy manara-penitra kanefa andehanan’ny mpizahatany be indrindra eto Madagasikara.
Elysée Ratsiraka “Alahelon-tseza no tena hanenjehana ahy”
Taorian’ny nakan’ny polisy am-bavany ny Ben’ny tanànan’i Toamasina Elysée Ratsiraka ny herinandro teo dia nivoaka tamin’ny fahanginany ny lehilahy.
Fitondram-panjakana Efa tsy atokisan’ny vahoaka intsony
Tsy nohenoin’ny mpitantana ny firenena mihitsy ny fitakian’ireo firaisa-monina sivily sy ny sehatra tsy miankina tao anatin’ny 4 taona nitondran’ny fanjakana Hery Vaovao hoan’i Madagasikara, hoy ny mpanoratra politika Toavina Ralambomahay.
Herilanto Raveloharison Marefo ny andrim-panjakana eto Madagasikara
Tsy kisendrasendra akory ny safidy fototra fanamafisana ny fahafahan’ny vahoaka Malagasy miatrika ireo tandindona ara-tsosialy sy ekonomika na koa ny sehatry ny tontolo iainana miaraka amin’ny fiovan’ny toetrandro ao anatin’ny CPP (Cadre de Partenariat Pays),
FIZAFATO Roa ireo kandida hiatrika ny fifidianana
Roa ireo kandida hiatrika ny fifidianana izay ho filohan’ny fikambanana FIZAFATO ny 6 aogositra ho avy izao etsy amin’ny Compelexe scolaire Ampefiloha.
Mamy Rakotoarivelo Tia nanampy, hoy ireo niara-niasa taminy
Anio no haterina eny am-pasan-drazany eny Talatan’i Volonondry i Mamy Rakotoarivelo izay nindaosin’ny fahafatesana ny zoma teo.
Pr Thaina Johnson Jacky “Ny vahiny no mampahantra antsika”
Tsy tongatonga ho azy ny fahantran’ny Malagasy fa ninian’ny vahiny nampahantraina isika, raha ny fanehoan-kevitry ny Profesora Thaina Johnson Jacky, manampahaizana momba ny politika.
Vehivavy hita faty tany Antsirabe Tapaka ny lohany sy ny rantsam-batany
Zava-doza no nitranga tany Antsirabe. Vehivavy manodidina ny 25 taona raha ny tombatombana no hita faty tao Vatofotsy avaratry ny toby fivarotan-tsolika Galana, omaly alahady vao maraim-be ; notapahana ny lohany ary tapaka ihany koa ny tanana aman-tongony.
Bemasoandro Itaosy Mifanolana ny samy tompon-tany
Misy karazana ady tany mitranga ao amin’ny kaominina Bemasoandro Itaosy amin’izao fotoana izao. Efa ho herinandro mahery no nitrangan’izany.
Fiarabe manototra tany amin’ny alina Velon-taraina ny eny Andrefan’Andoharanofotsy
Velon-taraina ny mponina eny Andrefan’Andoharanofotsy amin’izao fotoana izao noho ny afitsok’ireo kamio lehibe manototra tany eny an-toerana.
Vain-drahalahy tsy marary
Mbola miteraka adihevitra hatrany ny resaka fanatanterahana fisaonam-pirenena eto amintsika, indrindra fa taorian’ilay mpanakanto malaza iray,
Fifamoivoizana ana habakabaka Lanitra tokana ho an’i Afrika
Nisokatra ny sabotsy teo teny amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny Anosy ny fivorian’ny minisitra ao anatin’ny antokon-draharaha misahana ny fifamoivoizana sy ny fandriampahalemana ana habakabaka aty Afrika (ASECNA).
Zava-mahadomelina Tsy ampy taona ny 75 %-n’ireo mpidoroka
Mihamitombo isa hatrany ireo olona mandray sy mihinana zava-mahadomelina eto amintsika. Ireo ankizy tsy ampy taona 14 ka hatramin’ny 18 taona no tena maro an’isa.